Miorim-paka ao amin’ny Finoana Fibebahana
Miorim-paka ao amin’ny Finoana, 2004
Ny fibebahana dia iray amin’ireo fitsipika voalohan’ny filazantsara (jereo ny Fanekem-pinoana 1:4). Zava-dehibe ho an’ny fahasambaranao eo amin’ity fiainana ity sy any amin’ny mandrakizay izany. Mihoatra noho ny fanekena ireo fahadisoana fotsiny ny fibebahana. Ny fibebahana dia fiovan-tsaina sy fiovam-po izay manome antsika fomba fijery vaovao momba an’Andriamanitra, sy ny tenantsika ary izao tontolo izao. Fialana amin’ny fahotana sy fitodihana any a